About us - Dongguan Weldo ngqo machining Co., Ltd.
I-Dongguan Weldo ngqo machining Co., Ltd.yimveliso eqinisekisiweyo yi-ISO 9001, esekwe ngo-2008. Ukusukela oko yasekwayo, ibiyiminyaka eli-13, besibambelele kwinkolelo yenkampani ukusukela ekuqaleni kokusekwa, itekhnoloji ebalaseleyo, umthengi Ekuqaleni.
Singumthengisi wemveliso onokuthenjwa kule ndawo. Sisekele igama elingenakulinganiswa kuhlolo lomgangatho, inkonzo yabathengi, ulondolozo lwasemva kokuthengisa kunye nokusetyenziswa, kunye nezixhobo eziphambili, ezibeke isiseko esiluqilima kwilizwi labathengi bethu.
Isiseko semveliso siseDongguan, isixeko esidumileyo somzi mveliso. I-Dongguan yenye yezona ndawo zinkulu zokuvelisa emhlabeni ezinamandla okuvelisa kunye nenkqubo yezamashishini epheleleyo. Inkampani yethu ineemitha zesikwere ezingaphezu kwe-6000 zesityalo, egxile kwiinkonzo zomatshini ezichanekileyo ze-CNC kunye ne-OEM, iinkonzo zecandelo le-ODM.
Izixhobo zokulungisa zibandakanya uninzi lwamaziko machining e-CNC aphezulu, i-CNC lathes, i-lathes, oomatshini bokugaya, oomatshini bokugaya, ukusika ucingo, njl njl, kwaye ikwangenise izixhobo zovavanyo oluphezulu ezinje nge-CMM, altimeter kunye neprojektha.
Abathengi bethu baseAsia, eMntla Melika naseYurophu. Sizimisele ekuveliseni nasekuboneleleni ngomgangatho ophezulu iindawo CNC machining kubathengi kulo lonke ihlabathi. Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwezonyango, kwiisemiconductor, koomatshini nakwamanye amashishini.
Sineqela leetalente eziphambili ezikhokela ulwazi lobungcali boomatshini abasebenza ngokuchanekileyo kunye nezixhobo, kwaye zikhokele abasebenzi bezobuchwephesha ukuze baqonde izakhono zesicelo, kwaye balawule ishishini ngokwesayensi, elikuphuhliso oluvakalayo.
Sineqela lobunjineli elinamava kunye nabasebenzi abanamava kwezobuchwephesha, besisoloko sicela abasebenzi bezobuchwephesha ukuba babe neendlela zokulungisa eziphezulu kwaye basebenzise itekhnoloji engqongqo kunye nobunzima ukufikelela kwiziphumo ezingcono. Ngawo onke amandla kunye nehlombe, sigxile ekuboneleleni abathengi ngeemveliso eziphezulu zezakhono kunye nomgangatho ophezulu, kwaye sibe liqabane lakho elithembekileyo. Ndijonge phambili kuthethathethwano lwakho.
Nenkqubo elungileyo ethembekileyo esemgangathweni, ukuma okukhulu kunye nenkxaso yabathengi egqibeleleyo, uthotho lweemveliso kunye nezisombululo eziveliswe ngumbutho wethu zithunyelwa kumazwe amaninzi kunye nemimandla Ukulandela imigaqo yeshishini yezibonelelo ezifanayo, siphumelele igama elihle phakathi kwabathengi bethu kuba yeenkonzo zethu ezigqibeleleyo, iimveliso ezisemgangathweni kunye namaxabiso aphantsi. Sibamkela ngokufudumeleyo abathengi abavela ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba basebenzisane nathi ukuze siphumelele ngokufanayo.
Siyathemba ukuba sinokuseka intsebenziswano yexesha elide nabo bonke abathengi, kwaye sinethemba lokuba singaphucula ukhuphiswano kwaye siphumelele kwimeko yokuphumelela kunye nabathengi. Sibamkela ngokunyanisekileyo abathengi abavela kwihlabathi liphela ukuba banxibelelane nathi ngayo nantoni na oyifunayo! Wamkele bonke abathengi kokubini ekhaya nakumazwe aphesheya ukuze batyelele umzi-mveliso wethu. Siyathemba ukuba nobudlelwane beshishini lokuphumelela kunye nawe, kwaye senze ingomso elingcono.